How'd it happen and more reports?: INVESTMENT IN MYANMAR - မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု
INVESTMENT IN MYANMAR - မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု
မြန်မာနိုင်ငံဟာ 676,577 sq km ကျယ်ဝန်းပြီး (Eastern Hill Region, Central Valley Region, Western Hill Region) ဆိုပြီး အပိုင်း (၃) ပိုင်း ခွဲခြားထားပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ (1) တရုတ်နိုင်ငံ (Sharing Borders – 2,204 km) ၊
(2) ထိုင်းနိုင်ငံ (Sharing Borders – 2,107 km) ၊
(3) လာအိုနိုင်ငံ (Sharing Borders – 238 km) ၊
(4) အိန္ဒိယနိုင်ငံ (Sharing Borders – 1600 km) ၊
(5) ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ (Sharing Borders – 271 km) စသည်ဖြင့် နယ်နမိတ်ခွဲခြားလျှက် တည်ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ရှိတဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေမှာ - Natural Gas, Petroleum, Gold, Jade, Ruby, Gemstones, Copper, Tin, Antimony, Lead, Zinc, Silver, Teak & other Timber စတာတွေ ထွက်ရှိပါတယ်။
စိုက်ပျိုးမြေဧက များသည့်အလျှောက် အဓိကထားစိုက်ပျိုးမှုများမှာ - Rice, Pulses & Beans, Sesame, Maize, Rubber, Fruits & Vegetables စတာတွေဖြစ်ပါတယ် (ပြည်တွင်းသုံး GDP) ပိုလျှံမှုတွေကို နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့ပါတယ်။
မြန်မာရဲ့ Geographic အားသာချက်ကို ပြန်ကြည့်ပြန်ရင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ (US, Germany, France, India, China, Japan) စတဲ့နိုင်ငံတွေအကြားမှာ အချက်အချာ-ဗဟိုချက်ဖြစ်တာကြောင့် Direct Trade ဖြစ်စေ၊ Transit or Supply Chain ဖြစ်စေ၊ Trade Facilitation ဖြစ်စေ အလားအလာကောင်းမွန်တဲ့ နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Second Wave Reform (စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု) နဲ့အတူ Ministry of Commerce အနေဖြင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ GIZ အကူအညီဖြင့် National Export Strategy (NES) ကို ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်လျှက်ရှိနေပါပြီ။
NES ရဲ့ Vision ကတော့ Sustainable Export-Led Growth Prosperity for Emerging Myanmar (ထွန်းသစ်စမြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပို့ကုန်ဦးဆောင်တဲ့ စဉ်ဆက်မပြက်ဖွံ့ဖြိုးမှု နှင့် ကြွယ်ဝမှုဆီသို့ ဖြစ်ပြီး
Priority Sectors ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်...
(GOOD) အဓိကပို့ကုန်အဖြစ်– (Rice, Variety of Bean, & Oil Seed Crops, Fish & Crustaceans, Texture & Garments, Wood Based Products) စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
(SERVICE) ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် – Tourism လုပ်ငန်း။
(EMERGING) အနာဂတ် အလားအလာအဖြစ် – Rubber စိုက်ပျိုးမှု၊ စတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ရေရှည်ကုန်သွယ်မှုဖော်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖော်ဆောင်ခွင့်ရှိတဲ့ စက်မှုဇုံလုပ်ငန်းတွေ အနေဖြင့် (1) Agro-based Industry, (2) Wood-based Industry, (3) Textiles & Garment Industry, (4) Food Stuff Industry, (5) Pharmaceutical Industry, (6) Machine – Tools & Spare Parts Industry, (7) Porcelain & Chemical Industry စသည်ဖြင့် လက်ရှိအနေအထားမှာ နိုင်ငံသားပိုင် (သို့) နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။
YANGON Region (1- Eastern, 2- Western, 3- Northern & 4-Southern Industrial Zone)၊ MANDALAY Region (1- Mandalay, 2- Meiktila and 3- Myingyan)၊
MAGWAY Region (1- Yananchaung and 2- Pakokku)၊
BAGO Region (1-Pyay)၊
AYEYARWADY Region (1-Pathein, 2- Hinthada and 3- Myaungmya)၊
SAGAING Region (1- Monywa, 2- Shwebo and 3- Kalay)၊
MON State (1- Mawlamyaing)၊
TANINTHAYI Region (1- Myeik)၊
SHAN State (1- Taung Gyi) စတဲ့နေရာတွေမှာ လက်ရှိဖော်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Nay Pyi Taw Region (Nay Pyi Taw)၊
Rhakhine State (Ponnakyun)၊
Tanintharyi Region (Myawaddy)၊
Mon State (Phayar Thone Zu)၊
Kayin State (Phaan)၊
Mandalay Region (Yadanapone)၊
Shan State (Nantoon) စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း အသစ်ဆောက်လုပ်ဖော်ဆောင်နေဆဲရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအသုံးအများလာတဲ့ (Usages) အနည်းငယ်ကို ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရစေ။ (CSR – Corporate Social Responsibility), (GDP – Gross Domestic Product), (GNP – Gross National Product), (GMP – Good Manufacturing Product), (ISO – International Standard Organization), (HDI – Human Development Index), (BOT – Building, Operating & Transferring), (BOD – Board of Director), (GSP – Generalized Systems of Preference), (NES – National Export Strategy), (MIC – Myanmar Investment Commission), (AEC – ASEAN Economic Community), (AFTA – ASEAN Free Trade Area), (BEMS – Big Emerging Market), (WTO – World Trade Organization), (MDG – Millennium Development Goal).
မြန်မာ့အနာဂတ်မှာ ရေတိုတန်ဖိုးတရားဖြစ်တဲ့ ငွေကြေး၊ အရင်းအမြစ်၊ သယံဇာတ တွေကို ရေရှည်တန်ဖိုးတရားဖြစ်တဲ့ လူ့စွမ်းအားတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုကို မဟာဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုရင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရင်းအမြစ်သယံဇာတတွေကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဖန်တီးနိုင်စေဖို့မျှဝေရေးသားလျှက်။